Admin_John – Page3– Daily Feed MM
မိမိအိမ် မီတာခ သက်သာစေနိုင်ဖို့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ် မီတာ တွက်နည်း
လစဥ် အိမ်သုံးမီတာခတွေများနေလို့ အကုန်အကျများနေသူများအတွက် ချိန်ဆပြီးအသုံးပြုနိုင်စေဖို့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ် မီတာ တွက်နည်းအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ တွက်နည်းကိုသိထားတဲ့အတွက် ချိန်ဆ တွက်ပြီးသုံးတတ်မယ်ဆိုလျှင် မီတာခကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေနိုင်မှာဖြစ်သလို မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သုံးစွဲနှုန်းယူနစ်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ကြည့်ပြီး မီတာခကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ မီတာခတွက်နည်း (၁)၁၀၀၀ ဝပ် ၁ နာရီ ၁ ယူနစ်” ပုံသေနည်းနဲ့ မီတာခ ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာလျှပ်စစ်ပါဝါသုံးစွဲနှုန်းတွေရှိပါတယ်။
Admin_John | March 22, 2022
အိမ်ခြံမြေဈေး ကွက်အတွင်းမှာ မြေ၊ တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်မှုတွေမှာရောင်းမှား ဝယ်မှားမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ မြေအမျိုးအစားအလိုက်စစ်ဆေးရမယ့် စာရွက် စာတမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ၊တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမယ်ဆို ရင် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းအမျိုးအစား အလိုက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက အပြည့်အဝမတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူတဲ့အခါပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသူတွေ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို
၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ် သရက်သီး ရာသီ အတွင်း သရက်ပင် အများစုမှာ ပန်း များစွာ ပွင့်ကြတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ သို့သော် အချို့အပင်တွေမှာ ပန်းခိုင် များက ပန်းပွင့် လာပေမယ့် အသီး မတင်လာ တာတွေ၊ ပန်းခိုင်များ ခြောက်သွား တာတွေကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလည်း
ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ “ဝ” ဥ စိုက်ပျိုးနည်းအကြောင်း အတွေ့အကြုံ
အတွေ့အကြုံအရ ပြောပြချင်ပါတယ်!မြေညှက်ညှက်ဖြစ်အောင် ပျိုးဘောင်ပြင်ဆင်ပါ! ပျိုးဘောင်ပြင်ဆင်ရာတွင် လိုအပ်သောမြေဆွေး/ နွားချေး/ရရာကိုထည့်ပေးပါ!ပြီးရင် အညှောင့်ထွက်စပြုနေတဲ့ ဝဥဖူးတံသီးကိုလက်လေးလုံး (၃လက်မ)ခန့်ခွာ၍ ပျိုးဘောင်ပေါ်ဖြန့်ချပေးပါ! အပေါ်က ညှက်အောင်ချေထားတဲ့ မြေဆွေးပါးပါး(လက်မဝက်ခန့်)ဖုံးအုပ်ပေးပါ! ပျိုးဘောင်ပေါ်ကို ကောက်ရိုးသို့မဟုတ်မြက်ခြောက် တစ်လက်မခန့် လုံအောင်ဖုန်းအုပ်ပေးပါ! ရေလောင်းပေးပါ(ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ) တခြားသူရဲ့အတွေ့အကြုံကွဲပြားတဲ့ နည်းလမ်းရှိနိုင်ပါတယ်!! Credit – U Khun Myo Zawgyi Version အေတြ႕အႀကဳံအရ
အိမ်က သံပုရာပင်အပွင့်တွေပွင့်ပေမယ့်အသီးမတင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပေးပါ
Admin_John | March 17, 2022
အိမ်က သံပုရာပင်အပွင့်တွေပွင့်ပေမယ့်အသီးမတင်ရင်ဒါတွေလုပ်ပေးပါ….သံပုရာပင်တွေ အသီးတင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲသံပုရာပင်စိုက်တဲ့ ဦးကြီးတချို့ စိုက်ထားတာ (၃-၄) နှစ်ရှိပြီ အပွင့်တွေလည်း ပွင့်တဲ့အခါပွင့်ပေမယ့် အသီးမတင်ဘူး ကြုံတွေ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ကအချက်တွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီဗျ။ ၁။ နေရောင်ခြည် ။ သံပုရာပင်က အသီးတွေ မသီးခင်အချိန်မှာ နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရဖို့လိုပါတယ်ဗျ။ နေရောင်ကောင်းစွာမရရင်တော့ ပန်းလည်းများများစားစားပွင့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းမပွင့်ရင်တော့ အသီးလဲ
တစ်နှစ်ပတ်လုံး အထားခံတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ဆော့ လုပ်နည်းလေး မေးထားကြလို့ မအားတဲ့ကြားကနေ ပြောလိုက်ပါတယ်နော်။ခရမ်းချဉ်သီး ၁၀၀၀ ဖိုးဝယ်လာတာရေဆေးညှစ်ချ ပြုတ်ပြီး ကြိတ် အနှစ် ဖြစ်ရင် ပြန်အပူပေးကျို အအေးခံပြီး အထုပ်လေးလုပ် ရေခဲကန်ထဲ ထည့်သိမ်း။သဘာဝ အိမ်လုပ်ဆော့ချဉ် လုပ်မလား အချဉ်ရည်စပ်မလား ဘာအလုပ်လုပ် အဆင်ပြေပါသော ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်။ 🍅🍅ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် (